June 4, 2021 - समृद्ध नेपाल
पानीमा तैरिने ढुंगा भेटियो, दर्शनका लागि भक्तजनको भिड !
पानीमा तैरिने ढुंगा भेटियो, दर्शनका लागि भक्तजनको भिडधनगढी: त्रेतायुगमा भगवान रामले समुद्र पार गर्न ढुंगाको पुल बनाएको जनविश्वास रहँदै आएको छ। नल–नील नामक बाँदरले रामको नाम लेखेर समुद्रमा ढुंगा फाल्थे, जुन नदीमा तैरिने गर्दथ्यो। त्यस्तै एउटा ढुंगा भारतको आग्रामा फेला परेको छ। आग्राको एटमादौला क्षेत्रको नुनिहाइ पञ्चायत चौत्रा नजिकै बस्ने सनी बुधवार यमुना नदीमा नुहाउन
आजबाट ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ प्रशारण हुने !
आजबाट ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ प्रशारण हुने२ सातासम्म रोकिएको नेपालकै नम्बर १ रियालिटी शो द भ्वाइस अफ नेपाल ३’को प्रशारण आजबाट सुरु हुने भएको छ । शोका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले आजबाट निर्धारित समयमा नै शो प्रशारण हुन जानकारी दिए । २ साताअघि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै शोका नयाँ भागहरु छायांकन गर्न नसकेकाले प्रशारण रोकिएको
शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा भा’इर’ल एउटा भिडियोमा एक युवक’लाई डोरी’ले बाँ’धे’र कु’ट’पि’ट गरिरहेका छन् । एक पुरुषले उनलाई लठ्ठी’ले खुटटा’मा र शरीरमा पि’टि’रहे’को अरु धेरै मानिसले हेरिरहेका छन् । कु’टाइ खाने युवक रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ का विकास पासवान हुन् । कक्षा ११ मा पढ्ने उन’लाई बाँ’धे’र कु’ट’पि’ट गर्ने वडा नम्बर ४ बस्ने किन्सीदेव गिरी हुन्
बागलुङ नगरपालिका–३ का कुखुरापालक किसान देवेन्द्र पुनकामा रहेका ३०० ब्रोइलर कुखुराले ६० दिन नाघे । तौल बढेर चार किलो बढीका भइसके । पहिला ४०–४५ दिनमै कुखुरा बेच्नुपथ्र्यो । अहिले कुखुरा खोरमै थन्किएका छन् । महङ्गो दाना खुवाएर पाल्नुपर्ने स्थिति छ । पुनको खर्च बढेको बढ्यै छ । निषेधाज्ञाका कारण कुखुरा बिकेका छैनन् । बजार व्यवसाय
काठमाडौं । धनुष र काजोलको फिल्म ‘भीआइपी–२’ काम गरेकी अभिनेत्री राइजा विल्सन विशेष गरी आफ्नो सुन्दर अनुहारको कारण चर्चामा आउने गरेकी छन् । तर अब उनको त्यो सुन्दर अनुहारमा स’र्जरीपछि दाग लागेको छ ।टलिउड अभिनेत्री राइजाले सामाजिक सञ्जालमा एक तस्बिर सेयर गरेकी छन् । उक्त तस्बिरमा उनको अनुहार धब्बा लागेको छ । उनको एक साइडको
चलचित्रमा काम सुरु गर्दा मैले यौ’न उ’त्पी’ड’न’को सा’मना गरेको छु : प्रकृति श्रेष्ठकाठमाडौं– अभिनेत्री तथा मोडल प्रकृति श्रेष्ठले आफूले यौ’न उ’त्पी’ड’न’को सा’मना गरेको खुलासा गरेकी छन् ।मंगलवार सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा एक प्रशंसकले ‘तपाईंले कहिल्यै यौ’न उ’त्पी’ड’न’को सा’मना गर्नुभएको छ ?’ भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले इ’न्डस्ट्रीमा काम गर्न सुरु गर्दाको समयमा यौ’न उ’त्पी’ड’न’को सा’मना गर्नुपरेको बताएकी
नेपाल सरकारको कानून, नीति नियम तथा प्रक्रिया पूरा गरेर नै देशभर टेलिफोन सेवा पुर्याउन आतुर रहेको सिजी कम्युनिकेशनले जनाएको छ । लामो समयदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट एकीकृत अनुमतिपत्रको प्रतिक्षामा रहेको भन्दै सो कम्पनीले विद्यमान कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर अगाडि बढ्न खोजेको स्पष्ट पारेको छ । भारतमा सिम किनेपछि अल इण्डिया भ्याईस सित्तैमा, इन्टरनेटपनि सिमिततामा सित्तैमा
तिमी बिदेशबाट फर्केपछी भेट्ने भेट्ने भन्दा भन्दै सधैंका लागि छोडेर गयौ माया !
तिमी बिदेशबाट फर्केपछी भेट्ने-भेट्ने भन्दा भन्दै सधैंका लागि छोडेर गयौ अब हाम्रो भेट कहिलै नहुने भोनिशब्द छु छोरी स्तब्ध छु ! तिम्रो यो अप्रिय खबरले निसब्ध बनयो भगवान तिमी बिदेसबाट फर्केपछी भेट्ने भेट्ने भन्दा भन्दै एती धेरै दुर भईगयौ कि अब हाम्रो भेट कहिले नि नहुने भयो! किन यत्ति निष्ठुरी छोरी! तिम्रो आत्माले स्वर्गमा बास
माइतीले दुवै हात नहुने संग किन बिवाह गरेको ? छोडेर आइज त्यसले कसरि पाल्छ तर म उसलाई छोड्न सक्दिन बरु मर्छु भन्छिन् एलिना !
बाके समसेरगंज स्थित एक प्रेम जोडी अहिले काम को खोजि मा काठमाडौँ सम्म आएका छन्। प्रेम बिबाह गरेका सुरेश र एलिना ले ३ बर्ष को प्रेम बाट बिबाह गरेका हुन्। बिबाह पछि संगै मर्ने संगै बाच्ने भनि कसम खाएर बिबाह गरेका यो जोडी अहिले काठमाडौँ सम्म आएका छन्। काम को सिलसिला मा लम्जुङ्ग गएका सुरेश
स्वास्थ्य जीवनका लागि सबै भन्दा ठूलो कुरा हो। जब हामी स्वस्थ हुन्छौँ, तब मात्र जीवनमा खुसी, मिल्छ, काम गर्न मन लाग्छ र जीवनलाई सफल रुपमा स्थापित गर्न सक्छौँ । तर जीवन नै सफल भएन भने हाम्रो जीवन नै असफल बनिदिन सक्छ। हामीले सानो तिनो विरामी भयौँ भन्दैमा डाक्टरी औषधि सेवन गर्नै पर्छ भन्ने छैन्। हामीले